Singapour : Nanao Fihetsiketsehana Mba Hiarovana Ireo Alika Mpirenireny Ireo Mpitia Biby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2011 3:04 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, русский, বাংলা, Português, македонски, Italiano, 日本語, English
Taorian'ny rangotra sy kaikitra nahazo ny mpanao hazakazaka madinika iray, nataon'andianà alika mpirenireny ny 14 Desambra tao aminà vala iray vaovao tao Punggol Singapour, ny “Agri-Food & Veterinary Authority” (AVA) manampahefana miadidy ny resaka fambolena sakafo & fikarakarana ny biby dia nampitombo ny ezaka ataony mba hanangonana ireo alika mpirenireny manodidina ny faritra. Teo amin'ny 30 teo ireo alika voasambotra. Ary 4 teo ho eo no voalaza fa masiaka, ary novonoina.
Nanomboka teo, mponina mpitia biby avy ao Singapour no nanao fihetsiketsehana noho izany, tamin'ny fametrahana pejy Facebook miantso an-dramatoa Penny Low mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy amin'ny Pasir Ris-Punggol GRC ary ny AVA mba hanatsahatra ny famonoana ireo biby ireo.
“Misy fomba maro be azontsika atao mba hampihenana ny isan'ireo biby tsy manan-kialofana. Manao fanentanana ny olona mba tsy hanary ny bibiny. Mamela ny olona hanamboatra fonenana ho an'ireo biby ao an-tranony. Manohana ary mandrisika ny fanaovana izay hahamomba an'ireo biby. Izany vahaolana rehetra izany dia tsara kokoa noho ny famonoana ireo biby tsy manan-kialofana an'arivony ireo amin'ny filazàna fa “fiarovana ny mponina.”
Ireo mpanao asa an-tsitrapo koa dia nanomboka nanavotra ireo alika tamin'ny famonoana, tamin'ny fametahana sarin'izy ireo ao anatin'ilay vondrona mba hitadiavana mpikarakara sy mpanangana.
Alika iray avotra ary ankehitrny dia mila fonenana. (sary avy amin'i Hawk Cut Weis.)
Haslinda dia manantena fa tsy hampihemotra ny olona hitsidika ny faritra io tantara io :
“Ireo izay efa zatra io toerana io dia mety efa nahita ireo alika mpirenireny ireo imbetsaka. Manantena aho fa tsy hampihemotra ny olona tsy handeha any amin'io faritra io izany vaovao izany. Manantena ny hilaza ny toerana sasany nahitako alika matetika. Koa aza gaga raha mahita azy ireny mihaodihaody eny rehetra eny. Tsy hamely olona amin-tsy antony izy ireny.”
@jolantru dia nandefa bilaogy mikasika ny fanoherany ny famonoana alika mpirenireny:
“…mankarary fo ny fahitana azy ireo vonoina. Toy ny mahatsapa SRAS eny rehetra eny. Natsangako i Meow, zanaka saka notsimponina teny an-dalambe teny nandritra ireny taona nandreraka ireny, ary miaraka amiko izy ankehitriny, madio ary tena saka be fitiavana Tom. Ireo mpitia saka dia nalahelo ary tezitra be tamin'ilay famonoana biby mpirenireny. Angamba, nanao ny asany fotsiny ny AVA – kanefa tsy valin-teny ny famonoana azy.”
Kanefa, ny AVA dia nanambara ny ilàna ny fiarovana ny filaminan'ireo mponina ao Singapour, ary koa ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny fihanaky ny haromontana.